ကွကျသှနျကွိုကျလှနျးတဲ့ အမြိုးသားကို ဘှဲ့ယူတဲ့နမှေ့ာ ခဈြသူက ကွကျသှနျဖွူပနျးစညျးကွီး လကျဆောငျပေး
Homenewsကွကျသှနျကွိုကျလှနျးတဲ့ အမြိုးသားကို ဘှဲ့ယူတဲ့နမှေ့ာ ခဈြသူက ကွကျသှနျဖွူပနျးစညျးကွီး လကျဆောငျပေး
ဘှဲ့နှငျးသဘငျ အခမျးအနားတှမှော ဘှဲ့ယူမယျ့ ခဈြခငျရသူကို ပနျးစညျးတှေ၊ အရုပျတှေ ပေးလေ့ ရှိကွပါတယျ။ မလေးရှားနိုငျငံက မိနျးကလေး တဈယောကျက သူမခဈြသူ ဘှဲ့ယူတဲ့ အခမျးအနားမှာ ထူးခွားတဲ့ လကျဆောငျပေးခဲ့ပါတယျ။
အခကျြအပွုတျဆိုငျရာ စီမံဘှဲ့ကို Muhamad Adam Razali က Uitm ကနေ ရရှိခဲ့ပါတယျ ။ Adam ရဲ့ ခဈြသူ မိနျးကလေးက ကွကျသှနျဖွူနဲ့ ပွုလုပျထားတဲ့ ပနျးစညျးကို ပေးခဲ့ပါတယျ ။ Adam က စိတျဝငျစားစရာ ကောငျးတဲ့ ကွကျသှနျဖွူ ပနျးစညျးလေးကို ရတဲ့အခြိနျမှာ သိပျကို အံ့ဩပြျောရှငျသှားတယျလို့ ပွောပါတယျ။
Adam က သူ့ရဲ့ကောငျမလေးကို ဘှဲ့ယူတဲ့နမှေ့ာ ပနျးတှေ၊ ခြောကလကျတှအေစား ထူးခွားတဲ့ လကျဆောငျ တဈခု လိုခငျြတယျလို့ ပွောခဲ့ပါတယျ။ ဒီလိုကွကျသှနျဖွူပနျးစညျး ပေးလိမျ့မယျလို့ ဘယျတုနျးကမှ မမြှျောလငျ့ခဲ့ဘူးလို့ ပွောပါတယျ။ Adam က ကွကျသှနျကို အလှနျကွိုကျလို့ သူ့ရဲ့ခဈြသူက ကွကျသှနျဖွူပနျးစညျး ပေးတာဖွဈပါတယျ။ ကွကျသှနျဖွူ ပနျးစညျးကွီးကို ကိုငျထားတဲ့အခြိနျမှာ သူငယျခငျြးတှေ၊ မိသားစုဝငျတှကေ အံ့အားသငျ့ပွီး ကွညျ့နပေါတယျ။
“ကွကျသှနျဖွူ ပနျးစညျးရတာ ကြှနျတျော တဈယောကျတညျးပဲ ဖွဈပါလိမျ့မယျ။ တခွားသူတှကေ ခြောကလကျတှေ၊ ပနျးစညျးတှေ ရကွတယျ”လို့ Adam ကပွောပါတယျ။ ဘှဲ့နှငျးသဘငျထဲမှာ ကွကျသှနျဖွူပနျးစညျးရတဲ့ အကွောငျးရငျးကို လူတျောတျောမြားမြားက မေးခဲ့ကွပါတယျ။ Adam နဲ့ သူရဲ့ကောငျမလေး Hasnul Hisham Hasamuddin က တက်ကသိုလျ ဝငျတနျးကတညျးက ဆုံတှခေဲ့ကွတာပါ။
Adam က ကွကျသှနျကို အရမျးကွိုကျပွီး သူတို့နှဈယောကျတှတေို့ငျး ကွကျသှနျအကွောငျးပဲ အမြားဆုံး ပွောဆိုတတျကွတယျလို့ Hasnul က ပွောပါတယျ။ Adam က အခနျးထဲမှာလညျး စာကွိုးစားပွီး စညျးကမျးလညျး ရှိပါတယျ။ Adam က ဘှဲ့နှငျးသဘငျမှာရတဲ့ သူ့ရဲ့ကွကျသှနျဖွူ ပနျးစညျးကို မွတျမွတျနိုးနိုး သိမျးထားပါတယျ။ သငျကော ဘယျသူ့ကို ကွကျသှနျဖွူပနျးစညျး ပေးခငျြပါသလဲ?? ။
Ref - hitz
ကြက်သွန်ကြိုက်လွန်းတဲ့ အမျိုးသားကို ဘွဲ့ယူတဲ့နေ့မှာ ချစ်သူက ကြက်သွန်ဖြူပန်းစည်းကြီး လက်ဆောင်ပေး
ဘွဲ့နှင်းသဘင် အခမ်းအနားတွေမှာ ဘွဲ့ယူမယ့် ချစ်ခင်ရသူကို ပန်းစည်းတွေ၊ အရုပ်တွေ ပေးလေ့ ရှိကြပါတယ်။ မလေးရှားနိုင်ငံက မိန်းကလေး တစ်ယောက်က သူမချစ်သူ ဘွဲ့ယူတဲ့ အခမ်းအနားမှာ ထူးခြားတဲ့ လက်ဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ်။
အချက်အပြုတ်ဆိုင်ရာ စီမံဘွဲ့ကို Muhamad Adam Razali က Uitm ကနေ ရရှိခဲ့ပါတယ် ။ Adam ရဲ့ ချစ်သူ မိန်းကလေးက ကြက်သွန်ဖြူနဲ့ ပြုလုပ်ထားတဲ့ ပန်းစည်းကို ပေးခဲ့ပါတယ် ။ Adam က စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းတဲ့ ကြက်သွန်ဖြူပန်းစည်းလေးကို ရတဲ့အချိန်မှာ သိပ်ကို အံ့ဩပျော်ရွှင်သွားတယ်လို့ ပြောပါတယ်။
Adam က သူ့ရဲ့ကောင်မလေးကို ဘွဲ့ယူတဲ့နေ့မှာ ပန်းတွေ၊ ချောကလက်တွေအစား ထူးခြားတဲ့ လက်ဆောင် တစ်ခု လိုချင်တယ်လို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။ ဒီလိုကြက်သွန်ဖြူပန်းစည်း ပေးလိမ့်မယ်လို့ ဘယ်တုန်းကမှ မမျှော်လင့်ခဲ့ဘူးလို့ ပြောပါတယ်။ Adam က ကြက်သွန်ကို အလွန်ကြိုက်လို့ သူ့ရဲ့ချစ်သူက ကြက်သွန်ဖြူပန်းစည်း ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ ကြက်သွန်ဖြူ ပန်းစည်းကြီးကို ကိုင်ထားတဲ့အချိန်မှာ သူငယ်ချင်းတွေ၊ မိသားစုဝင်တွေက အံ့အားသင့်ပြီး ကြည့်နေပါတယ်။
“ကြက်သွန်ဖြူ ပန်းစည်းရတာ ကျွန်တော်တစ်ယောက်တည်းပဲ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ တခြားသူတွေက ချောကလက်တွေ၊ ပန်းစည်းတွေ ရကြတယ်”လို့ Adam ကပြောပါတယ်။ ဘွဲ့နှင်းသဘင်ထဲမှာ ကြက်သွန်ဖြူပန်းစည်းရတဲ့ အကြောင်းရင်းကို လူတော်တော်များများက မေးခဲ့ကြပါတယ်။ Adam နဲ့ သူရဲ့ကောင်မလေး Hasnul Hisham Hasamuddin က တက္ကသိုလ် ဝင်တန်းကတည်းက ဆုံတွေ့ခဲ့ကြတာပါ။
Adam က ကြက်သွန်ကို အရမ်းကြိုက်ပြီး သူတို့နှစ်ယောက်တွေ့တိုင်း ကြက်သွန်အကြောင်းပဲ အများဆုံး ပြောဆိုတတ်ကြတယ်လို့ Hasnul က ပြောပါတယ်။ Adam က အခန်းထဲမှာလည်း စာကြိုးစားပြီး စည်းကမ်းလည်း ရှိပါတယ်။ Adam က ဘွဲ့နှင်းသဘင်မှာရတဲ့ သူ့ရဲ့ကြက်သွန်ဖြူပန်းစည်းကို မြတ်မြတ်နိုးနိုး သိမ်းထားပါတယ်။ သင်ကော ဘယ်သူ့ကို ကြက်သွန်ဖြူပန်းစည်း ပေးချင်ပါသလဲ?? ။